Previous NKEWA: ZIMBABWE HORO MNANGAGWA KA O WU ONYEISI OCHE
Next ONYE ISI BUHARI NA-AGA EZUMIKE UBOCHI 10 NA LONDON
Hot News, Local News, OGE ANULI
Ndị na-agba egwú TVS hụrụ mgbawa mgbe a na-egwupụta egwu nke egwú eze egwú nke Nigeria bụ Kafayat Shafau (Kaffy), onye egwú Micheal Addo aka Small Doctor na BBNaija oge na Alex Asogwa a.ka Alex Unusual.
A na-edugharị ihe nkiri ahụ maka ndị na-emechi ihe nkiri na asọmpi egwu TVS na Lagos.
ONYE ISI BUHARI NA-AGA EZUMIKE UBOCHI 10 NA LONDON
Ndị isi na Wednesday bụ ndị isi na-ahụ maka ndị na-eme nchọpụta na otu onye na-anọchite anya ya bụ Nonso Cajenta aka Don Flex na Bet Njikọ Njikọ nke a maara dị ka Senator iji mee ka ndị ọbịa nwee nkà ịgba egwú ha.
Kaffy, bụ onye na-edekọ ihe nkiri ụwa nke Guinness maka ndị na-agba egwú nke kachasị ogologo oge, gosipụtara ụfọdụ n’ime agba egwú ịgba egwu dị ka ihe omume ahụ dị ọkụ.
Nke a na-esote obere oge ịgba egwú nke Alexunusual na-esote, bụ nke kpasiri mkpu ike site n’ìgwè ahụ, ihe ka ọtụtụ n’ime ha gbasoro ịgba egwú ịgba egwú na ụlọ BBNaija.
Ka ọ dịgodị, crooner Small Doctor nọ na-eme ka ìgwè mmadụ ahụ nọ n’ụkwụ ha ka ọ na-egwu egwu egwu ya.
Akwụkwọ akụkọ News of Nigeria (NAN) na-ekwu na asọmpi a na-akpọ ‘TVS CONFAM NAIJA DANCE’, na-emekarị ihe n’ịntanetị maka ihe dịka otu ọnwa na ndị na-asọmpi na-ekerịta vidio nke onwe ha na-egosipụta usoro ịgba egwú na-emepụta n’ihu ndị aghụghọ ma ọ bụ motrị.
Dị ka ndị na-ahaziri ya si kwuo, “nchịkọta asọmpi ahụ bụ ịchọta usoro egwu egwu kachasị dị egwu site na ndị na-akwado n’akụkụ nile nke Nigeria” na inyekwa ndị ntorobịa ike.
17 ndị na-asọ asọ si n’akụkụ nile nke Naijiria hapụrụ ịlụ ọgụ na njedebe, mgbe e kpuchiri ha ma họrọ site na nza nke ndị na-enyocha.
Onye mmeri, onye a ga-ekwupụta ọkwa n’ihu ọha, ga-enye onyinye ego nke otu nde Naira.
Onye mbu na-agba ọsọ ga-eburu puku naira na narị abụọ na-agba ọsọ, otu narị puku na iri abụọ na ise.
COMPETITION DANCE DOCTOR entertainment hot Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv ISIMBIDOP isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV KAFFY LATEST MUSIC new news post posts SMALL TVS update